बिग बोसका चर्चित जोडी अनुप र जसलिनको ‘ब्रेकअप’ ! – Everest Dainik – News from Nepal
बिग बोसका चर्चित जोडी अनुप र जसलिनको ‘ब्रेकअप’ !
काठमाडौं, असोज १६,
अभिनेता सलमान खानको टेलिभिजन शो ‘बिग बोस सिजन १२’ लाई ६५ वर्षीय भारतीय भजन गायक अनुप जलोटा र उनकी २८ वर्षीया प्रेमिका जसलिनको जोडीले बेग्लै रौनक दिएको छ । तर, बिग बोसको घरमा अाएकाे दुई हप्तामै अनुप र जसलिनको सम्बन्धमा दरार आएको छ ।
बिग बोसको घरमा दिइएको कार्य अन्र्तरगत अनुप जलोटाका लागि जसलिनले उनको कपाल छोट्याउनु पर्ने, लुगा र मेकअपका सामग्री नष्ट गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो । तर जसलिनले अनुपका लागि आफ्नो कपाल नछोट्याउने र लुगा र मेकअपका सामग्री नदिने बताएपछि अनुपले चित्त दुखाएका हुन् ।
आफू जसलिनका लागि ज्यान दिन पनि तयार रहेको तर जसलिनले आफूलाई भन्दा उनको कपाल, कपडा र मेकअपलाई माया गरेकाले अबदेखि उनी जसलिनका साथ नरहने निर्णय लिएका छन् ।
अनुप जलोटाले बिग बोस घरमा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्य तथा क्यामेराको अगाडि यस कुराको घोषणा गरेका छन । साथै अबदेखि बिग बोसमा आफू एक्लै रहने र जसलिनसँगको सम्बन्धमा नरहने बताएका छन् । अहिले अनुप र जसलिनबीचको ब्रेकअपको खबर सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
ट्याग्स: Big Boss 12